Apple wuxuu la socon doonaa Apple Car sida ay khubarada sheegeen. | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay la socon doontaa Apple Car sida ay khubarada sheegeen.
Waxaan horey u sheegnay in wararka xanta ah ee ku saabsan Apple Car (ama wax kasta oo ay ku dhammaato in la yiraahdo) ay hadda uun bilowdeen. Falanqeeyayaashu waxay sheegteen in gaariga Apple uu heshiis fiican u yahay shirkadda Mareykanka isla markaana ay tahay inuu noqdo kan ugu weyn ee la tartama Tesla. JP Morgan ayaa hada sheegaya in Apple waa inuu u tagaa. Uma qalmaan qiyaas ahaan nus qiyaas ahaan. Dhamaan ama waxba, taasi waa su’aasha.
Bangiga maalgashiga ee JP Morgan, ayaa ku sheegay falanqeyn cusub inuu rajeynayo in gaariga Apple uu noqdo mid si buuxda u madax bannaan oo shirkadda Mareykanka ah soo saaray dhamaadka 2020s.
Taasi waa, falanqeeyayaasha bangiga waxay aaminsan yihiin in gaariga Apple uu jiri doono dhamaadka tobankan sano. Kuo ka badan 2025. Warbixinadii ugu dambeeyay sidoo kale wuxuu tilmaamay in 2024. Dabcan, Haddii aan sidan ku sii socono, midkood ayaa saxnaan doona.
Samik Chatterjee oo ah falanqeeye maamule ayaa rajeynaya in shirkada weyn ee tiknoolajiyadda Cupertino ay qaado "go big" hab. Sug Apple inay raadiso xakamee xawaaraha hal-abuurka si loo kala saaro Apple Car loona dhigo suuqa kobaca ee bateriga baabuurta korontada ku shaqeeya ee si buuxda u madax banaan.
Sababta ugu weyn ee Apple u xiiseyneyso wershadaha baabuurta korontada ku shaqeeya ayaa ah in wadar ahaan suuqyadeeda wax laga qaban karo ay ku dhowdahay 2,55 trillions of dollars, oo ka sarreeya suuqa $ 420.000 bilyan ee casriga ah. Apple sidoo kale waxay fursad ku leedahay saldhig la rakibay oo ah 1.000 bilyan oo gawaari ah, iyo ismaamulka "Apple Car" sidoo kale wuxuu si qoto dheer u dhexgeli karaa una ballaarin karaa Adeegyada.
Gaariga «Apple Car» waxay noqon doontaa gaari qaali ah shirkadduna waxay u badan tahay inay ka doorbido wax soo saarka dibadda iyo isdhexgalka tooska ah marka hore. Dhibaatooyinka guud waxay u badan tahay inay aad uga hooseeyaan alaabooyinka kale ee qalabka Apple. Si kastaba ha noqotee, dakhliga wuxuu gaari karaa $ 700 bilyan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple waxay la socon doontaa Apple Car sida ay khubarada sheegeen.